မဆာဒါ, သမိုင်းသို့ခရီး ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ဣသရလေ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ငါကလေးဘဝတုန်းကလူကြိုက်များတဲ့တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲရှိတယ် မဆာဒါPeter O'Toole၊ Peter Strauss နှင့် Barbara Carrera တို့ကဲ့သို့သောသမိုင်းဝင်ပြဇာတ်ဖြစ်သည်။ အဲဒီနောက် Masada ရဲ့နာမနဲ့ဒီပုံပြင်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကြားဖူးတယ် Israelသရေလပြည်၊
ဒီနေ့ခေတ်တွင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောခမ်းနားထည်ဝါသောအပျက်အယွင်းများသည်၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် မဆာဒါအမျိုးသားဥယျာဉ် သူတို့ဖြစ်ကြသည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်သို့ဖြစ်လျှင်တစ်နေ့visitသရေလအမျိုးကိုသွားလျှင်၊
အပျက်အယွင်းများပါဝင်သည် ယုဒသဲကန္တာရ၌တည်သောနန်းတော်၊ မျက်မှောက်ခေတ်Israelသရေလနိုင်ငံရှိပင်လယ်သေအနီးတွင်ရှိသည်။ အထက်တွင်သင်ကိုးကားထားသောရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲများသည်ဂျူးများနှင့်ရောမလူမျိုးများအကြားဖြစ်ပွားခဲ့သောစစ်ပွဲတွင်မဟာဂျူးတော်လှန်ရေးဟုလူသိများသောနောက်ဆုံးကာလအကြောင်းကိုပြောပြသည်။ ယုဒလူတို့သည်ဤအရပ်၌ခိုလှုံ။ ၊ အကျဉ်းသားများအနေဖြင့်စုပေါင်းသတ်သေရန်မရွေးချယ်မှီတိုင်အောင်သူတို့သည်သူ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိုင်းထားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်မာဒါသည်ဂျူးအမျိုးသားရေးဝါဒနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှစ၍ areaရိယာတစ်ခုလုံးသည်အမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်းသည်ယုဒသဲကန္တာရသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ ယူနက်စကိုအရကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်ခဲ့သည်.
Masada ရပ်နေသည့်မြေပြင်အနေအထားသည်တိုက်စားမှုအလွန်များသောတိုက်ငယ်တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုက်စားမှုများစွာမရှိဘဲ၊ ပုံသဏ္inာန်မမှန်။ သို့သော်အမှတ်မရှိဘဲပိရမစ်နှင့်ဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်းပြင်မြင့်သည်အရှည် ၆၄၅ မီတာရှိပြီးအကျယ် ၃၁၅ ရှိသည်။ စုစုပေါင်းctရိယာ ၉ ဟက်တာရှိသည်။ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ချောက်ကမ်းပါးများရှိပြီးမီတာ ၄၀၀ မြင့်ပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်မူမီတာတစ်ရာခန့်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ထိပ်ကိုသွားဖို့ခက်ခဲသည်။
ရှေးဟောင်းအခြေချနေထိုင်မှုအကြွင်းအကျန်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းသမိုင်းပညာရှင်ဖလေဗီယိုဂျိုကိုဖို၏အဆိုအရရဲတိုက်အားဟာစမိုနီယန်ဘုရင်အလက်ဇန်းဒါးယန်နီယိုကတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Masada ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောသမိုင်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပြီး Pompey ကယုဒပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။
ဘုရင် ဟေရုဒ်သူသည်သူ့မိသားစုဝင်များနှင့်အတူရောမသို့ခရီးသွားစဉ်ဒေသတွင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အားဖြည့်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက်ခံတပ်သည် Parthians တို့၏ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့ပြီးအံ့သြဖွယ်ရာမိုးရွာသောကြောင့်သာသူတို့သည်ရေများကုန်ဆုံးသွားသောအခါအရှုံးမပေးဘဲနေခဲ့ကြသည်။ ဤအတောအတွင်းရောမတွင်ဟေရုဒ်သည်သူရှာဖွေပြီးထောက်ခံအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သည် ယုဒရှင်ဘုရင် တဖြည်းဖြည်းနှင့်သူသည်ထိုနယ်မြေကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ယေရုရှလင်မြို့ပြိုလဲသွားလေသည်။
သို့သော်သူတို့သည်အခက်အခဲများကြုံခဲ့ရသည်။ Marco Antonio Cleopatra VII ၏ပံ့ပိုးမှုကသူ၏နိုင်ငံကိုတိုးချဲ့လိုက်သောကြောင့်တစ်နေ့တွင်သူသည်ကျော်လွှား။ ကျော်လွှားနိုင်သောနေရာတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုတွေးမိသည်။ ဆယ်စုနှစ်ခုနစ်ခုသူသေဆုံးပြီးနောက် ပထမဂျူး - ရောမစစ် အဆိုပါတင်းမာမှုဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းက crescendo ၌တည်၏. အစွန်းရောက်ဂျူးအုပ်စုတစ်စုသည်ပုန်ကန်မှုတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်, အခြားသူများကိုပူးပေါင်းဒါကြောင့်အဆုံး၌အုပ်စုတစ်စု Copó Masada သည်ရောမတပ်ကိုသတ်ဖြတ်သည် အဲဒီမှာတပ်စွဲ။
နောက်နှစ်များအတွင်းထိုဒေသသည်မီးတောင်ဖြစ်ပြီးမာဒါသည်အထူးသဖြင့်အစက်အပြောက်မရှိသောနေရာတစ်ခုဟုသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ ရောမတို့သည်ထိုကိစ္စကိုအရေးယူ။ ဂျူးဒုက္ခသည်များကိုသတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် အများအပြားစစ်တပ်စခန်းများနှင့်အတူကဝန်းရံ။ တပ်မှူးသည်အရာရာကိုအသေးစိတ်စီစဉ်။ အနောက်ဘက်တောင်စောင်းသို့ဝင်ရန်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ မအောင်မြင်သည့်နံရံများကိုဖြတ်ကျော်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက်သူသည်ရက်သတ္တပတ်များစွာအမြင့်မီတာ ၁၀၀ အထိရောက်သောချဉ်းကပ်လမ်းကိုဆောက်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ပြီးနောက် ဝိုင်းထားခြင်းခုနစ်လ ချဉ်းကပ်လမ်းပြီးစီးခဲ့ပြီးမီတာ ၃၀ မြင့်သောသံဖြင့်အားဖြည့်ထားသည့်ဝိုင်းထားသည့်ရဲတိုက်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤအရပ်မှရောမလူတို့သည်ပြေး။ မြို့ရိုးသို့ပေးသောသိုးကိုအလုပ်လုပ်ကြ၏။ ခဏကြာပြီးနောက်ဂျူးများသည် ပို၍ တင်းကျပ်သောအုတ်တံတိုင်းကိုနံရံတွင်တည်ဆောက်ထားကြောင်းရောမများသိလိုက်သောအခါတိုက်ခိုက်မှုများကိုဖျက်သိမ်းပြီးထိုအဆောက်အအုံကိုမီးရှို့လိုက်သည်။
Masada ရှိဂျူးများသည်ဒုက္ခရောက်နေပြီးမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် လူတို့သည်သူ၏မိသားစုကိုသတ်ပြီးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး သတ်ရန် ၁၀ ယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်တည်းကျန်တော့တဲ့အထိတစ်ယောက်တည်းနေပြီးခံတပ်ကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးရောမတွေ ၀ င်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာသင်္ချိုင်းဂူတစ်ခုကိုတွေ့တယ်။
သို့သော် Masada ကိုရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များကမည်သည့်အချိန်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သနည်း။ ဒါဟာအစအ ဦး မှာဖြစ်ခဲ့သည် XIX ရာစုအထူးသ 1838 ခုနှစ်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ areaရိယာသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားလာပြီးအရာအားလုံးတူးဖော်ပြီးမြေပုံထုတ်ခဲ့သည်။ အဓိကရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ရေးကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Masada မှာဘာကြည့်လို့ရသလဲ El အနောက်ပိုင်းရှုပ်ထွေးသော ၎င်းကို Arad မှလမ်းကြောင်း ၃၁၉၉ ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဤတွင်သင်မြင်ရလိမ့်မည် ရောမစက်ယန္တရားများပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း site မှ Masada, အဖို့ အချစ်ဇာတ်လမ်း အဘယ်သူ၏တောင်တက်ခြင်း, တက်၏ 15 နှင့် 20 မိနစ်အကြား, ပါဝငျသညျ ရှေးဟောင်းမြောက်ပိုင်းရေလှောင်ကန် တောင်ထဲကတူး။ သီးခြားစျေးနှုန်းဖြင့် တဲထဲမှာနေဖို့အိပ်နိုင်တယ်။ တစ် ဦး လည်းရှိ၏ အလင်းနှင့်အသံပြပွဲ ပွဲကြည့်စင်၌ညအချိန်တွင်။
တောင်တန်းကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည် မြောက်နန်းတော်အပျက်အယွင်းဘုရင်ဟေရုဒ်၏သုံးထပ်တိုက်ကျသောနန်းတော်မှအဆောက်အအုံများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသည့်ပန်းချီကားများ၊ ဒုတိယဗိမာန်တော်လက်ထက်မှသာကျန်ရှိနေသောတရားဇရပ်, hitmen အားလုံး၏အမည်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်အခန်းထဲမှာ, ပုန်ကန်စဉ်အတွင်း Masada အတွက်သော့ခတ်ခဲ့ကြသောဂျူးအများစုအုပ်စုတစ် ဘိုင်ဇင်တိုင်းဘုရားကျောင်း ရသေ့ဘုန်းတော်ကြီးများကတည်ဆောက်ခဲ့သည့်ပန်းချီကား၊ အနောက်နန်းတော်, ကြီးမားခြင်းနှင့်လည်းဟေရုဒ်မင်းလက်ထက်မှချိန်းတွေ့ ရောမရေချိုးကန်ပန်းချီကားများနှင့်တပ်မှူး၏အခန်းများ တောင်ဘက်ရေကန်, တောင်အောက်မှာကြီးမားတဲ့အာကာသ။
ပင်လယ်သေမှလမ်းကြောင်း ၉၀ သည်သွားရာအရှေ့ဘက်ဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့်ဝင်သည် လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်, တစ် ဦး ကပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီဘူတာရုံတစ် စားသောက်ဆိုင်နှင့်ကဖေး.
ဒီမှာပါ Masada Yigal Yadin ပြတိုက်, 2007 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်, အကောင်းတစ် ဦး ပေးခြင်း, ရဲတိုက်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်များ၏ဇာတ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံကမ်းလှမ်းသော နောက်ခံ အလည်အပတ်ခရီး ကေအိုင်အို ၎င်းသည်သင့်အားအခက်ခဲဆုံးဖြစ်သောမြွေလမ်း၏တံခါးသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီးယခုတစ်နာရီအထက်နှင့်တစ်နာရီခွဲအထိခြေကျင်ဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။
ဒီလည်ပတ်မှုဟာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ် သင် ... နိုင်ပါသည် အွန်လိုင်းရှိ Masada အမျိုးသားဥယျာဉ်သို့ဝင်ပေါက်ကိုစာရင်းသွင်းပါ, တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ရက်စွဲကိုရွေးချယ်ခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » Masada, သမိုင်းသို့ခရီး